Warshadda Shiinaha iyo alaab-qeybiyeyaasha | Gelken
Collagen waxaa aad loogu adeegsadaa quruxda iyo is qurxinta. Collagen wuxuu leeyahay faa'iidooyinka daahirsanaanta sare, quruxda wanaagsan iyo saameynta daryeelka maqaarka. Waxay gashataa unugyada kansarka, kana hortagtaa inay koraan ama metastasizing. Collagen waxay ku habboon tahay sonkorowga, bukaanka kelyaha iyo bukaannada kale ee halista ah si ay u nuugaan cunto caafimaad leh oo tayo sare leh.
Collagen wuxuu sameysmaa qolof si loo siiyo xoog iyo qaab dhismeedka jirka.
Waxyaabaha Faahfaahinta Natiijo
Foomka abaabulka Budada labiska ah ama granules, jilicsan, oo aan wax karin DHAGAX
Midab Budada cad ama jaalle ah DHAGAX
Tijaab iyo ur Udgoon lahayn DHAGAX
Nijaasta Wasakh muuqda lama arko DHAGAX
cufnaanta isdabajoogga (g / ml) 0.3-0.5 0.32
Barootiin （% ratio saamiga beddelka 5.79） ≥95 97
PH solution 5% xal） 5.00-7.50 6.46
Dambas (%) .00 2.00 1.15
Qoyaanka (%) .00 7.00 6.3
Miisaanka Molecular （Da） 500-2000 500-2000
Bir culus (mg / kg) Lead （Pb ≤ .0.50 <0.50
Arsenic （Sida） ≤0.50 <0.50
Meerkuri （Hg） ≤0.50 <0.50
Chrome （Cr ≤ .002.00 0.78
Cadmium （Cd） ≤0.10 <0.1
Wadarta tirada bakteeriyada (CFU / g） ≤1000 <100
Koolaab (CFU / g） .10 <10
Salmonella (CFU / g） Taban Lama Oga
Staphylococcus aureus (CFU / g） Taban Lama Oga
Taariikhda nafaqada 100g NRV%
Barootiin 90g 150%
Dufan 0g 0%
Kaarboohaydrayt 0g 0%
Ku hay meel qabow oo qalalan, heerkulka 5 ℃ ilaa 35 ℃
Nolosha shelf: 2 sano laga bilaabo taariikhda soo saarista, baakadka asalka ah.
• Ka hortagga lafo-beelka; In kor loo qaado caafimaadka wadajirka ah, la ilaaliyo lana hagaajiyo kalagoysyada;
• Maqaar adag oo qurux badan, ka dhig maqaarka mid jilicsan, jilicsan, cidhiidhi ah oo laastik ah; Dharka dhalaalaya ee quruxda badan; Naaska hodanka ah;
• Miisaankaaga dhin oo taam ahaw; Hagaajinta xasaanadda aadanaha.
Hore: kolajiin bovine
Xiga: Koolajyada loogu talagalay qurxinta